Dawooyinka Guri 7 ee Si dabiici ah Looga Yareeyo Dhiiga Mycosis - Hagaajinta Caafimaadkaaga - TELES RELAY
ACCUEIL » Daawooyinka dabiiciga ah Dawooyinka Guri 7 ee Si dabiici ah Looga Yareeyo Cudurka Miyir-qabka (Cutaneous Mycosis) - Hagaajinta Caafimaadkaaga
Cudurka finanka ee loo yaqaan 'Cutaneous mycosis' waa jeermis ku faafa maqaarka oo ka muuqan kara meel kasta oo jirka ka mid ah, da 'kasta ha ahaato. Si kastaba ha ahaatee, waxay u badan tahay in laga helo madaxa, xubnaha taranka ama ciddiyaha, gaar ahaan cagaha.
Kala soo bax maqaalkan Daaweynta guryaha ee loo yaqaan '7' si dabiici ahaan looga bogsado mycoses cutaneous. Waxaan dooran karnaa mid kastoo iyaga ka mid ah ama waan isku dari karnaa oo waxaan ku badali karnaa si aan u helno hufnaan.
Daawooyinka cudurka loo yaqaan mycosis galmada
1. Saliidda aasaasiga ah ee geed shaaha
Geedka saliidda shaaha ee saliidda leh waa mid ka mid ah daawooyinka ugu caansan lidka ku ah mycosis galmada. Xaqiiqdii, tani waa qayb muhiim ka ah cuntada sida laga helo is qurxinta alaabada dabiiciga ah iyo kuwa farshaxanimada si loola dagaallamo finanka iyo finanka, iyo sidoo kale daaweynta candidiasis ama cystitis.
Si aad u aragto: Cystitis galmada ka dib galmada
Saliiddan saafiga ahi waxay noqon kartaa mid aad u xanaaq badan; Sidaa darteed waa inaan ka fogaano dalabkeeda xabka ama meelaha xasaasiga ah. Sidoo kale waan awoodnaa ku dil saliidda qumbahakaas oo sidoo kale leh astaamaha antifungal iyada oo aan loo xoog badnayn.
2. Saliidda lagama maarmaanka ah ee Oregano
Saliid kale oo muhiim ah oo sifiican waxtar ugu leh daawooyinka antibiyootigga iyo antifungal-ka ayaa laga soosaaray dhirta udgoonka leh ee oregano. Tani badanaa waa daaweyn aad u wanaagsan oo loogu talagalay a adeegsiga afkaillaa iyo inta sumadda sheygu ay tan tilmaameyso.
Waan awoodnaa isku dar saliidda muhiimka ah ee geed shaaha ama u isticmaal si kor loogu qaado daaweynta gudaha. Xaaladdan oo kale, qaado dhibic saliid ah lagu walaaxay shaaha oo ah saliid ama malab, 3 jeer maalintii.
Sanjabiilku waa daawo loogu talagalay dhibaatooyinka caafimaad ee badan. Xaaladda jirta, waxaan xoogga saareynaa awooddeeda si loo tirtiro noocyo gaar ah oo bakteeriyada iyo fangaska wax ku ool ah oo aan laheyn waxyeelo.
Waxaan u isticmaali karnaa saliiddan lama huraanka ah ama waxaan u diyaarin karnaa qubeys xoog leh oo sinjibiil ah. Tani waxay noqon kartaa wax ku anfacaya daaweynta daweynta fangaska ka muuqda ciddiyaha cagaha. Waxaan kaloo dalban karnaa casiir miro oo cusub.
Sidoo kale akhri: Casiirka iyo infus-ka lagu daweeyo cunaha xanuun
La propolis waa mid ka mid ah antibiyootigyada dabiiciga ah ee ugu wanaagsan ee looga hortago laguna daaweeyo dhammaan noocyada caabuqyada. Intaa waxaa dheer, sidoo kale waa mid wax ku ool ah ciribtirka fangaska maxaa yeelay waaqayb ay isticmaashay bees si ay u ilaaliso rugta nadiifka ah.
Waxaan ku dari karnaa daawaynta jirka la mariyo iyo afka laga qaato propolis:
Mawduuc: codsi toos ah aagga ay dhibaatadu saameysey. Waxaan kugula talineynaa inaad dooratid propolis bilaa aalkolo ah
Wadada Afka: 5 waxay ku dhacdaa saacad kasta ee 3 illaa ay ka baxdo mycosis goos goos ah. Taxadar ahaan, waxaan qaadi karnaa dhibcaha 5 calool madhan hal mar maalintii
5. Caanlon ee Ceylon
La qorfe waa uunsi udgoon oo dhadhamiya dhadhanka cuntada. Sidoo kale waa qayb muhiim ah oo ka tirsan golaheena dawooyinka dabiiciga ah. Xaqiiqdii, ay ka kooban tahay niacin, nitamine iyo ashitada ascorbic acid waxay ka dhigtaa sunta wax ku oolka ah.
Waxaan si toos ah u codsan karnaa saliidaha lagama maarmaanka ah ee qorfe ama u diyaarino qubeys, sida sinjibiil. Waxaan sidoo kale isku dari karnaa dhir udgoon 2 si kor loogu qaado saameyntooda bogsashada. Si kastaba ha noqotee, waa inaan had iyo jeer hubinaa inaan dooranno qorfe qorfeedka Ceylon, kaas oo ah daawo kala duwan.
Garlic kama maqnaan karto liistada daawooyinka loogu talagalay mycosis galmada sababta oo ah waa mid ka mid ah antibiyootigyada iyo antifungals-ka ugu awoodda badan iyo sida ugu wanaagsan ee loo yaqaan xilligan. Waxaan sidoo kale ku dari karnaa codsigiisa iyo adeegsiga tooska ah. Hadday nagu kacayso inaan cunno, waan iibsan karnaa kaabsalka eesaliida toonta.
Waxaa jira daaweyn cajiib ah oo looga hortago fungus ka dhaca xubinta taranka oo ka kooban soo gelinta ilkaha toonta sunta ah siilka. Siyaabo kala duwan ayaa loo sameeyaa oo waa inaan raacno tilmaamaha warqaddu u socoto. Daaweyntani waa mid wax ku ool ah, gaar ahaan daaweynta candidiasis.
Ugu dambeyntiina, theVero qadhaadh waa badeecad kale oo muhiim ah in lagu haysto guriga maxaa yeelay waxay bixin doontaa xalal badan oo degdeg ah oo loogu talagalay xaaladaha caafimaad ee kala duwan. Waxa kale oo ay qayb ka tahay waxtarka badan ee samaynta dhammaan noocyada alaabada dabiiciga ah ee guriga lagu sameeyo iyo waxyaalaha la isku qurxiyo.
Intaa waxaa sii dheer, aloe vera waxay leedahay faa'iidada weyn ee ay leedahay maqaarka jelin aan ka soo saarno geedka ama in aan iibsano, oo noo oggolaanaya a codsi dhakhso leh oo ku habboon. Waxay kaloo ku habboon tahay in lagu daro saliidaha kale maxaa yeelay waxay keenaysaa cadar aan ka tagin maqaarka dufan leh oo si fudud loo nuugo.
5 saliidaha lagama maarmaanka u ah si loo baabi'iyo onychomycosis
Onychomycosis waa xaalad aad u xunxumada quruxda ciddiyahaaga, soo hel saliidahan muhiimka ah si loo baabi'iyo. Read more »
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://amelioretasante.com/7-remedes-maison-pour-soulager-naturellement-la-mycose-cutanee/